ओलीले बन्दसत्रमा यति कडा सम्बोधन गरेपछि एमाले महाधिवेशनमा के भयाे ? — Imandarmedia.com
ओलीले बन्दसत्रमा यति कडा सम्बोधन गरेपछि एमाले महाधिवेशनमा के भयाे ?
काठमाडौँ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिस्पर्धामा जान नहुने भन्दै बन्द सत्रमा कडा सम्बोधन गरेपछि एमालेभित्र मुख्य पदहरूमा जसरी पनि सहमति गराउने कोसिस तीव्र भएको छ ।
चुनावी प्रतिस्पर्धाका कारण एक दिन महाधिवेशन लम्बिने अवस्था देखिइरहेका बेला एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले आइतबारै महाधिवेशन समापन हुने जानकारी दिएका छन् ।
अहिले उनीविरुद्ध उपाध्यक्ष भीम रावलले उम्मेदवारी दिने कोसिस गरेका छन् । रावलले मानेको अवस्थामा अन्य पदहरूमा मिल्ने अवस्था देखिएको एक नेताले बताए । महासचिवमा मुख्यतः विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको दाबी छ ।
सहमति हुने सर्तमा पौडेल र पोखरेल दुवैले आफूहरू ओलीको निर्णय मान्न तयार रहेको संकेत ओलीलाई दिएका छन् । तर सबै नमानेको अवस्थामा भने प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ।